Complicatons of multigravida - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Complicatons of multigravida
ရှငျမှေးလှနျးဆိုလို့ ရာဇဝငျထဲက မငျးသမီးကို သှားမမွငျလိုကျပါနဲ့ဦး။ကြှနျမတို့ ဆရာဝနျတှကေ ကလေးမှေးလှနျးတဲ့ မမေတှေကေို ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါတဲ့နာမညျလေးပါ။ဆေးပညာအရတော့ ကလေး ” ၅ယောကျ”ထကျ ပိုပွီးမှေးထားတဲ့ မိခငျတှကေို ကလေးမြားတဲ့ ( Multipara) မိခငျ
တှလေို့ သတျမှတျပွီး သူတို့ကိုယျဝနျထပျဆောငျတဲ့ အခါ အန်တရာယျမြားတဲ့ ကိုယျဝနျ( High Risk Pregnancy )လို့သတျမှတျပါတယျ။
ရှငျမှေးလှနျးတှေ ကိုယျဝနျထပျဆောငျတဲ့အခါ ဘာတှဖွေဈနိုငျပါသလဲ?
၁) ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ သှေးတိုးနိုငျပါတယျ။ပုံမှနျကိုယျဝနျဆောငျတှထေကျ ၂ဆပိုဖွဈပါတယျ။
၂) ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခြိနျသိပျမခွားဘဲ ယူတာမို့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျသှေးအားနညျးနိုငျပါတယျ။
၃) အခငျြးတှယျကပျစရာနရော သိပျမရှိတော့တာမို့ အခငျြးရှရေ့ောကျတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။မှေးလှနျးတဲ့ သားအိမျဟာ ပြော့ပွီး ဆှဲအားနးနတောကွောငျ့
_ မှေးနခြေိနျမှာ သားအိမျ ကှဲထှကျတာ
_ မှေးဖှားခြိနျမှာ သှေးသှနျတာ
_မှေးဖှားပွီး သှေးဆငျးတာမရပျဘဲ သားအိမျထုတျပဈရတာ
_ကလေးမှေးခြိနျမတိုငျဘဲ အခငျြးစောကှာတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ကလေးအမြားကွီးမှေးတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ ပြော့သှားတဲ့ ဗိုကျကွှကျသားတှကွေောငျ့
_ ဆီးမထိနျးနိုငျတာတှဖွေဈနိုငျပါသေးတယျဒါဆို ကလေး အမြားကွီးမှေးတာလညျး မကောငျးဘူးပေါ့နျော။ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားဘယျလောကျခွားပွီးယူသငျ့တယျဆိုတာ နောကျဆောငျးပါးမှာဖျောပွပါဦးမယျ။
ရှင်မွေးလွန်းဆိုလို့ ရာဇဝင်ထဲက မင်းသမီးကို သွားမမြင်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ကျွန်မတို့ ဆရာဝန်တွေက ကလေးမွေးလွန်းတဲ့ မေမေတွေကို ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့နာမည်လေးပါ။ဆေးပညာအရတော့ ကလေး ” ၅ယောက်”ထက် ပိုပြီးမွေးထားတဲ့ မိခင်တွေကို ကလေးများတဲ့ ( Multipara) မိခင်
တွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး သူတို့ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်တဲ့ အခါ အန္တရာယ်များတဲ့ ကိုယ်ဝန်( High Risk Pregnancy )လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ရှင်မွေးလွန်းတွေ ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
၁) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးတိုးနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေထက် ၂ဆပိုဖြစ်ပါတယ်။
၂) ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်သိပ်မခြားဘဲ ယူတာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သွေးအားနည်းနိုင်ပါတယ်။
၃) အချင်းတွယ်ကပ်စရာနေရာ သိပ်မရှိတော့တာမို့ အချင်းရှေ့ရောက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မွေးလွန်းတဲ့ သားအိမ်ဟာ ပျော့ပြီး ဆွဲအားနးနေတာကြောင့်
_ မွေးနေချိန်မှာ သားအိမ် ကွဲထွက်တာ
_ မွေးဖွားချိန်မှာ သွေးသွန်တာ
_မွေးဖွားပြီး သွေးဆင်းတာမရပ်ဘဲ သားအိမ်ထုတ်ပစ်ရတာ
_ကလေးမွေးချိန်မတိုင်ဘဲ အချင်းစောကွာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးအများကြီးမွေးတာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ပျော့သွားတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကြောင့်
_ ဆီးမထိန်းနိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါဆို ကလေး အများကြီးမွေးတာလည်း မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားဘယ်လောက်ခြားပြီးယူသင့်တယ်ဆိုတာ နောက်ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြပါဦးမယ်။
Tips for moms of children who are difficult to feed